Sidee in laga takhaluso finan nabarradii: dhibco fadhiya wajiga? – Jannah News
Home/Acne/Sidee in laga takhaluso finan nabarradii: dhibco fadhiya wajiga?
naag – dabiiciga ah ee abuurka,
isha ay xoog halabuur.
Ma doonaysaa in laga takhaluso Wasaqda ah, nabarradii iyo nabarro finan naftaada?
Hello, akhristayaasha qaaliga ah ee blog!
Waxaan sii wadi doonaa wada hadalkeena on topic ah ee post-finan (cawaaqibka malax). maanta, annagaa ku sheegi doonna, sida in laga takhaluso of nabarradii finan guriga iyo wadaagaan karinayo waji ugu waxtarka badan. iyo, waxaannu Muujin doonaa qarsoon, sida si ay u qariyaan ayna duleella u la qurxiyo.
Our article kaa caawin doona in aad takhaluso qaladaadkeyga! Nala joog oo wuxuu ku raaxaysan reading.
Inta badan siyaabo aamin ah takhalusaya Wasaqda iyo nabarradii
Sida loo sameeyo maaskaro guriga post-finan?
Fasaska haragga waxaa mar walba na waxay keeni in dareenka xun. gaar ahaan, marka ay leeyihiin cawaaqib, iyo ka tago ka danbeeya ah "waanada" ee foomka of nabarradii ama degidda ee maqaarka. Waxaan ku dadaaleynaa in la takhalusi isaga ah. maanta, waxaan idinla wadaagi doonaa talooyin, taas oo kaa caawin doona in ay ka saarto nabarradii guriga.
Waxaa laga yaabaa in muuqdaan, in is-nadiif ah post-finanka - ma suurtowdo in. si kastaba ha ahaatee, haddii wakhtiga si ay u bilaabaan si ay u qabtaan habka - wax kasta oo suurto gal ah, maxaa yeelay, nabarradii cusub in la keeno inta badan ka sahlan!
siyaabo wax ku ool ah oo ah yareynta nabarradii:
dhibtoonaya wanaagsan la wax la isku qurxiyo post-finan. Habka codsiga waa mid aad u fudud: dhalaalayaa walax, pointwise codsatay oo laga saaray ka dib markii lagu qalajiyo. Markaas hubi inaad codsato cream huurka ah.
Waa laga iibsan karaa halkan .
Bleaching - hab fiican si loo soo saaro dhibco da'da, fududeeyo nabarradii. Waxaad ku samayn kartaa adigoo isticmaalaya qurxiyo gaar ah, iyo isticmaalka waji, waxaad si fudud u samayn kartaa guriga.
kareemada cuntada, scrubs iyo waji waxaad ka akhrisan kartaa dhamaadka this article. Bleaching kaloo ka caawisaa in xataa midab maqaarka, taas oo la simi, qooraansaneynaa.
Duugista la saliidaha la isku qurxiyo. The benefits of massage wajiga weligiis la hadli kartaa! Ka dib oo dhan, waxay ka caawisaa si ay u yareeyaan gabowga, Waxaa codadka maqaarkaba ah, smoothes maqaarka. saliidda isku qurxiyo, waxaad ku dari kartaa 1-2 dhibcood oo ether.
tusaale ahaan: 1 qaado oo yicib saliid iyo 2 dhibcood oo saliid geed shaaha, eucalyptus, rosemary. dhaqdhaqaaqa nidaamsan xoqin isku dar ah in ka badan khadadka massage.
Halabuurka The of saliidaha, sida aad ogtahay, aad u faa'iido badan, walxaha, in ka kooban ether ku dardar-shiid, loo dardar-cusboonaysiinta ee unugyada iyo epidermis smoothed.
qalab Darsonval - caawin doontaa in aad ka saarto Wasaqda. Maaddaama ay naxdin leh koronto yar, uu si taxadar leh u shaqeeya on maqaarkaba ah. karsado, iyada oo nozzles, u timid inaad epidermis. Markaas bakteeriyada oo lagu dilay Muqdisho, baxo caabuq.
Darsonval sidoo kale dedejisaa wareegga dhiigga. isticmaalka nidaamsan yaraynaysaa bixisay fiidda oo nabarradii, nabarradii. Sidoo kale hagaajinaysaa xaaladda maqaarkaba ah oo dhan, bilowdo hawsha nadiifinta dhalashadii labaad, shidaa soo saarka ee collagen, elastin, gilaurona.
Isku dhafan oo kareemada, labeen, scrubs - waxaad ka heli doontaa saamayn cajiib ah! fursad Nabadgelyada Buy Darsonval .
Waa waxtar leh si ay u sameeyaan kiriim leh oo khal cider iyo liin. Waxaa whitens ma aha oo kaliya, laakiin sidoo kale kor u bogsiinta deg deg ah ee unugyada, dedejisaa cusboonaysiinta, smoothes epidermis, Waxay ku siinaysaa barti.
qaadan vitamins aad, gaar ahaan, A iyo S. koorsooyinka in 2 oo bisha. Waxay kaa caawin si loo hagaajiyo xaaladda maqaarka. sidoo kale, cabbaan biyo ku filan.
ka rays UV aad maqaarkaaga u dhowrtid -inache dhisi doono dhibco mugdi, in, ma, jiidaan muuqaalka. gaar ahaan, haddii aad qolofka acid ama isticmaal saliidaha lagama maarmaanka ah ee orange, liin, bambeelmo.
view, Talooyin waa mid aad u fudud! bilow waqtigii of daaweyn - waa furaha guusha, heshiiyaan? Marka guriga, aad uga takhalusi karo of post-finan.
Ma jeclaan lahayd in la isticmaalo wakiilada ku daweyn jira, U dir ka jirta noocyada farmashiye dukaanka online Pharmacosmetica .
Dabcan, haddii ay dhacdo daran: nabarradii qoto dheer, leedahay caabuq unhealed, iyo waxbarashada subcutaneous - waxaa haboon in ay soo booqdaan maqaarka. Influence waa bogsan kaliya epidermis, calaamadaha ma la arki karo oo ah caabuq iyo suppuration.
Secrets of a suurto-gal, kaa caawin doona inaad ku dhuumato nabarradii ka:
Codso on Primer maqaarka, waxay kaa caawin doontaa in ay waafajiyaan gargaarka.
dheeraad ah, buraashka gaar ah ama geed isbonji la dalbo concealer. Looma baahna in la sameeyo daahan waa mid aad u qaro weyn! Waxaa xidhmin kartaa daloolada iyo sii xumayn xaaladda.
On meelaha ay waxyeello, ka codsan concealer, waxaa iyaga ku caawin doona in ay qarin
Qari caawimaad casaan concealer cagaaran, waa si fiican u duubashada. Codsan waa in lixdii bilood burush.
Hagaajin qurxiyo isticmaalaya budada.
Xusuusnow xukunka: muhiim ma aha in loo qoondeeyo isha ama dibinta. Waxaa fiican in la sameeyo wax yar lahjadda a on sunnayaasha, bushimaha waa codsan lipstick ama hadh gloss nyudovogo, indhaha keeni kartaa qalin madow yar.
Had iyo jeer isticmaal tayo leh, isku qurxiyo baaro , oo ma keeni xasaasiyad.
Waxaa jira xarumo heer sare ah, in aad ku karsan kartaa guriga. Waxay kaa caawin doonaa inaad yaraynta cuncunka, iyo dardar-wareegga dhiigga iyo cusboonaysiinta. Waxa kale oo aad arki doontaa, maqaarka ku iftiimin doonaa quruxda iyo caafimaadka.
ugu muhiimsan, xusuuso - in loo sameeyo waji, diirka iyo codsan cream waa in si joogto ah, haddii kale natiijada habka maayo.
Waa inaad samir, sida ay tahay in ay soo saaraan collagen ku filan, bal yaa awooda inuu buuxiyo meelaha ay waxyeello u noqon doonaa. waxyaalaha la isku qurxiyo ma doonto oo kaliya in laga takhaluso nabarradii, laakiin sidoo kale si looga hortago finanka.
Waji dhoobo dheeriga ah ee ethers caawin si loo hagaajiyo xaaladda maqaarka, loo dardar-cusboonaysiinta. Waa arrin aad u muhiim ah, si loo soo saaro collagen oo elastin. Ka dib oo dhan, kuwaas oo laba cunsur ayaa ka mas'uul ah barti ee maqaarka.
esters (rosemary, lavender, manuka, liin) ma aha oo kaliya loo dardar-wareegga dhiigga, laakiin sidoo kale kor u bogsiinta deg deg ah ee post-finan.
Clay - waxay jilcisaa, Waxaa nadiifiyaa ah daloolada iyo moisturizes. Add saliidda ee dhoobo cad ama cagaar in ay si tartiib ah - waxay noqon doontaa in ku filan 1-2 dhibcood.
Honey iyo qorfe - dhigi a maqaarkaba ah oo jilicsan, silky, quudin iyo moisturize. Honey - saarka la yaab leh, taas oo ka tiro ka mid ah cudurada faa'iido iyo inta badan loo isticmaalo ujeeddooyin isku qurxiyo. Qorfe - kulaalaa ilaa maqaarka, Wuxuu dadajiyaa-shiid.
baraf qurxiyo - waa mid aad u fudud si ay u diyaariyaan! Waxaa lagama maarmaan ah in ay qaataan dhir ah, jar u googooyo (ama ayi ee days a) ku shub biyo karkaraya, ha dhiga iyo shubaa noocyo gaar ah oo baraf. Aad u faa'iido badan si ay u tirtiri wejiga la barafka ee subaxda iyo fiidka,. In subaxdii - nidaamkan aad ka farxiyaa, fiidkii - nafiso daal iyo stress shaqada ka dib.
Badyaga la hydrogenperoxid - leh ee dalkiisa cawin, taas oo ka caawisaa in ay waafajiyaan maqaarka, baabi'iyo barar iyo yareeyaa cuncun. maaskaro Recipe qiyaastii ah: 1 iyo malqacad dhoobo, 1 iyo malqacad iyo concoctions 4 dhibcood oo hydrogenperoxid 3%.
Dooro ugu jeclaa aad maaskaro ee post-finan iyo maalin walba. Waxa kale oo xusid mudan in ka mid ah in ay ku xoqeen ayay daryeelka baraf iyo gaaska la shito. therapy Complex iyo daryeelka maqaarka si taxaddar leh si ay u caawiyaan aad ula qabsan lahayd calaamadaha finan.
Isticmaal isku qurxiyo organic , ciyin vitamin adag .
haddii, 2-3 bilood ka dib waxaad arki doontaa isbedel muuqda, waa in aad la tashato dhakhtarka maqaarka ama Qurxisada. Is ogow adigu of, daryeelo maqaarka waqtiga oo dhan - oo waxay aad ugu mahad naqayaa doonaa!
Aruurin walwal mawduuca of finan oo dhan, waxaan ka baranaynaa doonaa oo ku saabsan sababaha ay muuqaalka, sida loo daaweeyo iyo kii kaalmo u wacan.
ugu dambeyntii, maanta la kulmay siyaabaha, sida loogu guuleysto post-finan guriga. waji Recipes ballaadhiyaan aad is-daryeel iyo ka dhigi maqaarka siman iyo silky.
Xusuusnow - aad u qurux badan!
Subscribe to blog, si ay u sii taliska oo dhan wax soo saarka cusub oo dunida quruxda, caafimaadka iyo shaqo-abuurka.
Wadaagaan macluumaadka la saaxiibadaa, maxaa yeelay this topic waa walaac badan.
dhowaan ku arko!
Maadaama aad ahaayeen Ilona
Haddii this article ahaa caawin in aad si, waxaa mahad - qalbiga ku Nuur)))
Sidee in meesha laga saaro nabarradii finan wajiga: dhibco, habraacyada
daawooyinka Folk finanka - 10 cuntada sida wax ku ool ah, waayo, guriga
Как избавиться от прыщей за 24 SFIga